Roadcrash.io waa ciyaar badan oo ciyaartoy badan halkaasoo aad shil kaga galeyso dadka kale | Androidsis
Roadcrash.io waa mid ugub ku ah Android oo aad ku qasbanaan doonto inaad shil gasho baabuurta oo dhan waxaad ka heli kartaa inta ugu macquulsan ee lacag ah. Sidan ayaad ku bilaabi doontaa orodka ciyaarta cusub taas oo waxa muhiimka ah ay burburayaan halkii aad ka eegi lahayd wadada si aadan uga tagin.
Taasina waa runti wadada kama bixi doontid waqti kasta, Maaddaama wax walba ay diyaar u yihiin inaad shil ku galiso kuwa kale, in kasta oo aad u baahan tahay inaad si wanaagsan u kaxeyso gaarigaaga ciyaar kubbadda cagta ah oo aad la ciyaarayso hooska ciyaartoyda kale.
1 Iio caadi ah oo shil ku dhaca iyadoo aan loo eexanayn
2 Fur furayaasha gawaarida wadada Roadcrash.io
3 Ciyaar gawaarida gaashaaman
Iio caadi ah oo shil ku dhaca iyadoo aan loo eexanayn
Roadcrash.io ayaa dhigaya lahjadda ku saabsan tan shilalka. Marka hore waxay u muuqan kartaa wax la yaab leh, laakiin markaad aragto inaad heshay dahab badan oo naxdin kasta leh, tani waxay noqon doontaa mid aan joogsi lahayn. Taasi waa, haddii aad karti u yeelatid shoog ka dib naxdin, waxaad gaari doontaa yoolka sida ugu dhakhsaha badan ee aad moodeysay.
By habka, halkan haddii wareeg ku dhammaado, oo aan xad lahayn waa waxa aan uga jeedno. Ficil ahaan ciyaarta waxay ku saleysan tahay adeegsiga usha koontaroolka si aad uga dhaqaaqdo bidix ilaa midig oo markaa halkii aad uga fogaan laheyd kuwa kaa soo horjeeda, aad la dagaallanto iyaga si aad u baabi'iso. Inta badan ee aad baabi'iso, lacagta ayaa ka badan, sidaa darteed shaygu waa mid aad u fudud.
Waxa ugufiican dhamaan Roadcrash.io waa taa kuma sii ekaato wax iska yimid. Laakiin lacagtaas ama dahabka la helay, waxaad u adeegsan kartaa inaad ku soo saarto gawaarida ay tahay inaad horumariso si aad ula mid noqoto kuwa la midka ah iyo horumarka heerka baabuurta aad heli karto. Waxaan horeyba u ognahay ciyaaro aan tiro lahayn oo noocan ah oo ku saleysan ciyaartaas, markaa halkan waxaan fursad u leenahay inaan la soconno baabuurkeenna oo aan ku raaxeysanno dhowr la mid ah.
Fur furayaasha gawaarida wadada Roadcrash.io
Oo markaa waxaan sii wadaynaa inaan ku ciyaarno cinwaankan cusub ee awood u leh inuu ku xirmo kan ugu rinjiga badan. Mana ahan sababta oo ah markaan ordayo waxaan heysanaa geyn farsamo oo dhan, runtiina ma jiro oo waa wax aad u fudud laakiin waa xaqiiqda kaliya ee ah inaan isku dhacno dadka kale si aad u kasbato cajiinka kadibna aad ugu isticmaasho gawaari badan. Ku guuleysiga iyo kharash garaynta ayaa ku dhow saldhigga ciyaarta ee Roadcrash.io oo doonaya inaadan iloobin ka mid ah liiska ciyaaraha laga yaabo inaad ku rakibtay bartaada.
Kuwaas Ciyaaraha .io waxaa jira waxyaabo badan, dhawaan uun waxaan ku haysanay midkan ku saleysan asalka asalka ah ee BombermanIn kasta oo halkan ay wax badan ka yihiin helitaanka lacag shil ku dhacda ka dibna hagaajinta gaariga. Xaqiiqdii waxaan la yaabanahay haddii multiplayer runtii yahay multiplayer. Sababtoo ah waxaad sameyn kartaa magacyada boqolaal ciyaartoy oo sidaas darteed waxaad siin kartaa dareenka ah inaan dhaafi karno kuwa kale. Waa run in tartamayaashu aysan waxbadan ka qaban guusha tartanka.
Taasi waa, waa maxay samee waa horey u soo dhaqaaq waana taas. Laakiin sidaan soo sheegnay, tani ma ahan qodobka ugu muhiimsan ee ciyaarta waxaana runtii loo sameeyay si loo siiyo dareenka ah inaan wajaheyno ciyaar .io ah oo aan ku qaniinno ciyaartoy badan.
Ciyaar gawaarida gaashaaman
Oo sidaas Waxaan u nimid heshiis aan caadi aheyn oo ku saabsan Android si wanaagsan ayaa loogu heshiiyay taasina waxay nagu martiqaadeysaa inaan sii wadno ciyaar ka dib ciyaarta si aan u horumarino gawaaridayada oo aan u helno tiro badan. Waxaan cadeyn karnaa gawaarida tirada badan ee la heli karo iyo inaan ku jirno freemium taas oo aad awoodi doontid inaad lacag ku qarashgareyso haddii aad rabto.
Farsamo ahaan maahan in ay tahay wax lala yaabo, laakiin sida ay u fududahay waxay naga caawineysaa inaan ku xirnaano sidii inaan u ciyaareyno indie caadi ah. Xaqiiqdii, sawirada iyo naqshadeynta ayaa aad ugafiican markaad shaashadda kujireyso si aad uhorumariso gawaarida marka loo eego tartamada laftooda, kuwaas oo si fudud u fudud.
Roadcrash.io waa arcade aan caadi aheyn oo waqti fiican ah iyo in kastoo ay u muuqato mid hiwaayad ah, waxay kugu xidhi doontaa ugu yaraan muddo dheer. Inaad wax badan dheesho waxay ku xirnaan doontaa arrimo kale oo taxane ah oo aanan rabin inaan magacawno.
Qiimeynta xiddiga 2.5
Ku mashquul inaad isku dhacdo dadka kale
Tartamada waa mid aad u fudud
Developer: Nasiib wanaag Kat Studios
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ha xishoon, Roadcrash.io waa inaad isku dhacdaa dhammaan baabuurta aad awoodid
Ma waxaad raadineysaa telefoon raqiis ah? Huawei P30 Lite waa qiimaha ugu fiican Amazon